खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त - नेपालबहस
खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त
३० भाद्र २०७७ | १९:०६:२८ मा प्रकाशित
३० भदौ, काठमाडौं । सरकारले डा.युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवडालाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त भएका खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय सेवा सुविधा पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन नचाहेपनि पार्टीभित्रको दबाबले फेरि राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न सकेका थिएनन् ।
अर्थमन्त्रीबाट बाध्य भएर राजीनामा दिएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन् । खासगरी विदेशी दातासँग राम्रो सम्बन्ध रहेका कारण वैदेशिक ऋण ल्याउन सहज होस भनेर ओलीले खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएकाे बताइएकाे छ ।
कुलमानको छायाँमा लटपटिएको ओली प्रवृत्ति ४ दिन पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीको युवराज मोह ५ दिन पहिले
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजीनामा दिएपश्चात पनि किन घटिरहेको छ बजार ? २ हप्ता पहिले
बामदेवमाथि फेरि पनि धोका हुने संकेत, मन्त्रिपरिषदमा कुरै भएन २ हप्ता पहिले
अब को बन्ला नयाँ अर्थमन्त्री ? २ हप्ता पहिले
आईपीएलमा डिभिलियर्सको २०० छक्का ! भर्खरै
कैद सजाय छुट हुने व्यवस्थालाई विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह २२ मिनेट पहिले
लगातार उकालो लाग्दै आएको बजार थामियो, नेपाल बैंक शीर्ष स्थानमा ३१ मिनेट पहिले
अब विदेशमा रहेका नेपालीले मोबाइलबाटै आफन्तलाई रकम पठाउन सक्ने ३७ मिनेट पहिले
वार्ता र संवादमार्फत त्रिविका समस्या समाधान गर्न नेविसंघको माग ४१ मिनेट पहिले
पर्यटनलाई चलायमान बनाउन यतीको आकर्षक प्याकेज सार्वजनिक ४६ मिनेट पहिले
हैदरावादलाई १६४ रनको लक्ष्य, देवदुत र डीभिलियर्सको अर्धशतक ५० मिनेट पहिले